Umsakazo nombhalo O Tannenbaum ukuphrinta nge-Kiunder
O tree Christmas - amanothi kanye nombhalo
O isihlahla sikaKhisimusi - umbhalo
Isiko lokucula amakhemikhali eKhisimusi ekhaya nomndeni kanye nezingane, noma esikoleni nase-enkulisa, akusidala kakhulu. Kuphela kusuka ku-18. Ikhulu leminyaka lihlabelele emndenini womndeni futhi kusukela kuphela ku-19. Ikhulu leminyaka liyazi izingoma zaseJalimane ezivela kwamanye amazwe.
Umsakazo nombhalo O Isihlahla sikaKhisimusi
Ukucula nokwenza umculo ndawonye kanye noKhisimusi kuzungeze umkhathi omuhle, okhethekile kakhulu futhi oyingqayizivele. Akuzona izingane kuphela zonyaka wonke ezikujabulela. Ngokuvamile izingoma ziphindaphindiwe noma zizwakala ngalesi sikhathi, kungcono umbhalo uhlezi. Uma ungakwazi ukudlala ithuluzi, ungakwazi ukudlala okuhambisanayo.
Ngokuchofoza esithombeni, ishidi lokubala ngamanothi kanye nombhalo we-carol kaKhisimusi kuvula ngefomethi ye-PDF
O Isihlahla sikaKhisimusi, o Isihlahla sikaKhisimusi,
ukuthi aluhlaza kangakanani amaqabunga akho.
Awunayo kuphela eluhlaza ngesikhathi sasehlobo,
Cha, ngisho nasebusika, uma iqhwa:
Yeka ukuthi amaqabunga akho aluhlaza kanjani!
Ngaki kaningi ongekho ngesikhathi sikaKhisimusi
Umuthi wakho uyangithokozisa!
izingubo zakho zifuna ukungifundisa okuthile!
Ithemba nokuhlala njalo
unikeza induduzo namandla kunoma isiphi isikhathi!
Vula umculo wephepha we-Christmas carol O Tannenbaum njengefayela lesithombe
Njalo ngonyaka - amanothi nombhalo
Wonke amadada ami - amanothi nombhalo
Zonke izinyoni sezikhona kakade - amanothi kanye nombhalo
Esihlahleni sikaKhisimusi izibani ziyavutha - amanothi ...
Abafowethu beza ukudansa nami - amanothi nombhalo
Inyanga ivukile - amanothi nombhalo
Jabulela uKhisimusi yonke indawo - amanothi nombhalo
Fox, uthathe i-goose - amanothi nombhalo